यी बार गर्नुहोस् नयाँ कामको सुरुवात – क’माउनु हुनेछ सो’चेभन्दा बढी धन ! – Butwal 24 News
August 29, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on यी बार गर्नुहोस् नयाँ कामको सुरुवात – क’माउनु हुनेछ सो’चेभन्दा बढी धन !
व्यक्तिको जीवनमा जन्म बार र राशी ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । हरेक व्यक्तिको जन्म बार हेरेर नै व्यक्तिको कुण्डली नि’र्माण गर्ने गरिन्छ । जन्मेको बार र राशीले नै ब्यक्तिको भ’विष्य बारे बताउने
गर्छन् । ज्योतिष शा’स्त्र अनुसार जो कसैले व्यापार व्य’वसाय र नोकरी गर्नको लागि पनि आफु जन्मेको बारमा कुन दिन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने ज’नविश्वास रहेको छ । त्यसकारण आज हामी तपाईलाई सात बार मध्ये कुन दिन के कामको सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बारे जा’नकारी दिन गइरहेका छौँ ।